Madaxweyne Farmaajo & Sheekh Shariif oo goordhow wada kulmaaya (Ujeedka) - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Farmaajo & Sheekh Shariif oo goordhow wada kulmaaya (Ujeedka)
Madaxweyne Farmaajo & Sheekh Shariif oo goordhow wada kulmaaya (Ujeedka)
Muqdisho (Caasimada Online)-Sida aan wararkeena hore ku sheegnay waxaa goordhow magaalada Muqdisho soo gaaray Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sheekh Shariif ayaa waxaa Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka kala tirsan labada Gole, Saraakiil iyo Ciidamo farabadan oo ka tirsan dowlada.
Waxa ay sidoo kale isla soo qaadi doonaan xal u helida tashwiish Madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre kala dhexeeya Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo bilahaani ku xirtay Xildhibaanada Mooshinada diyaariya.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa kaalin weyn ka qaadan doona qafiifinta duufaanada Siyaasadeed dhinacyo badan kaga kacsan dowlada.
Si kastaba ha ahaatee, imaanshiyaha Sheekh Shariif ayaa kusoo beegmaaya xili dowlada Somalia ay dhexda kaga jirto mowjado kacsoon.